Koorsada Qaabaynta Daadka - HEC-RAS oo laga soo bilaabo xoq - Geofumadas
Falanqaynta Daadka iyo Daadka oo leh barnaamij bilaash ah: HEC-RAS
HEC-RAS waa barnaamij ay wadaan Ciidamada Mareykanka ee Ka Hawlgala Injineerada, ee loogu talagalay qaabeynta daadadka webiyada dabiiciga ah iyo kanaalada kale. Koorsadan hordhaca ah, waxaad ku arki doontaa hanaanka lagu xaqiijinayo moodellada hal-cabirka ah, in kasta oo nooca 5-aad ee barnaamijka, qaabaynta socodka laba-geesoodka ah lagu daray, iyo sidoo kale awooda moodelinta wareejinta qashinka.
Koorsadu waxay horay ugu mari doontaa geedi socodka guud ee abuurista moodelka: laga soo bilaabo abuuritaanka joomeriyka, gelitaanka xogta falanqaynta, fulinta muunad, iyo dhoofinta xogta.
Waa koorso caadi ah wax ku ool ah iyadoo la adeegsanayo qiyaasta saxda ah ee lagama maarmaanka u ah aragtida, halkaas oo agab la bixiyo si ay ula socdaan cashar kasta waqtiga dhabta ah.
HecRas waa barnaamij loogu talagalay xisaabinta daadadka iyo daadadka.
Ogow isticmaalka HEC-RAS heerka bilowga
Fahmaan mabaadiida aasaasiga ah ee biyo-abuurka iyo dareeraha biyaha ee uu isticmaalo barnaamijka
Abuur moodellada daadadka oo tarjun natiijooyinkooda
Aqoonta aasaasiga ah ee cilmiga biyaha
Maamulka softiweerka heerka bilowga
Xirfadlayaashu waa inay sameeyaan moodallo daadad
Waxaan xiiseynayaa inaan ogaado barnaamij cusub oo faa iido u leh mihnadaada xirfadeed
Post Previous" Hore Koorsada madaniga ah ee 3D ee loogu talagalay shaqooyinka madaniga ah - Heerka 2
Post Next Koorsada qaabaynta iyo falanqaynta daadadka - iyadoo la adeegsanayo HEC-RAS iyo ArcGISNext »